စဈဘေးရှောငျတှကေို ဘေးလှတျရာသို့ပို့ဆောငျရငျး ကဆြုံးသှားတဲ့ ဒုဗိုလျရှေးဖဲရဲ့ ဈာပန – Shwe Thadin
ကရငျနီပွညျ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျအတှငျးမှ ပွညျသူမြားကို ဘေးလှတျရာသို့ ကယျထုတျရငျး ဒုဗိုလျ ရှေးရယျ ( ရှေးဖဲ) ယမနျနကေ့ ကဆြုံးခဲ့ရသညျ။ဇှနျလ ၁၁ရကျ၊ မှနျးလှဲပိုငျးက ပွညျသူမြားကို ကယျထုတျရငျး ဒီးမော့ဆိုအရှခွေ့မျး ဦးတညျလာသညျ့ အ ကွ မျး ဖ ကျ..
စဈကောငျစီတပျနှငျ့ ထိပျ တို ကျ တိုးကာ တို ကျ ပှဲအတှငျး ကဆြုံးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။နရောအတိအကဆြိုလြှငျ ဒေါခူလီရှာ အရှဘေ့ကျ (၂)မိုငျခနျ့တှငျ ၃နာရီကြျောကွာဖွဈပှားသညျ့ တို ကျ ပှဲအတှငျး ကရငျနီပွညျသူမြားကို ကာကှယျရငျး ဒုဗိုလျ ရှေးဖဲ ကဆြုံးခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျ။…
ဒုဗိုလျ ရှေးဖဲသညျ ဒီးမော့ဆိုအရှခွေ့မျးဇာတိဖွဈပွီး ကရငျနီတပျမတျောသို့ ၂၀၁၃ခုနှဈတှငျ ဝငျရောကျခဲ့ပွီး အခွခေံစဈပညာ၊ အရာရှိသငျတနျး၊ စှမျးရညျမွှငျ့သငျတနျးမြား တကျရောကျခဲ့သူဖွဈသညျ။ကရငျနီတပျမတျော အမှတျ(၂)တပျရငျး၊ တပျခှဲ(၂)တှငျ…
တာဝနျထမျးနသေူဖွဈပွီး လတျတလော ကရငျနီပွညျ တို ကျ ပှဲ ပွ ငျး ထ နျနခြေိနျ ပွညျသူမြားကို ဘေးလှတျရာသို့ ကယျထုတျရေး တာဝနျယူရသူဖွဈသညျ။ဒု- ဗိုလျရှေးဖဲမကဆြုံးမီအထိ ၎င်းငျးအနနှေငျ့ တို ကျ ပှဲအတှငျး တာဝနျထမျးဆောငျနစေဉျ စဈဘေးရှောငျ..
ကရငျနီပွညျသူ (၁၀၀) ကြျောကိုဘေးကငျးလုံခွုံရာ နရောသို့ပို့ဆောငျနိုငျခဲ့သညျ။ဒီးမော့ဆိုသို့တာဝနျဖွငျ့ ပွနျရောကျလာသညျမှာ ရကျပိုငျးသာရှိပွီး ကဆြုံးခြိနျတှငျ အသကျ (၃၀) နှဈရှိပွီး ဇနီးသညျနှငျ့ ရငျသှေးငယျ သားတဈဦး ကနျြရဈခဲ့ကွောငျး ကရငျနီပွညျ လူငယျသမဂ်ဂက ဖျောပွသညျ။….
စစ်ဘေးရှောင်တွေကို ဘေးလွတ်ရာသို့ပို့ဆောင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ဒုဗိုလ်ရှေးဖဲရဲ့ ဈာပန
ကရင်နီပြည် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှ ပြည်သူများကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ကယ်ထုတ်ရင်း ဒုဗိုလ် ရှေးရယ် ( ရှေးဖဲ) ယမန်နေ့က ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ဇွန်လ ၁၁ရက်၊ မွန်းလွဲပိုင်းက ပြည်သူများကို ကယ်ထုတ်ရင်း ဒီးမော့ဆိုအရှေ့ခြမ်း ဦးတည်လာသည့် အ ကြ မ်း ဖ က်..
စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ထိပ် တို က် တိုးကာ တို က် ပွဲအတွင်း ကျဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။နေရာအတိအကျဆိုလျှင် ဒေါခူလီရွာ အရှေ့ဘက် (၂)မိုင်ခန့်တွင် ၃နာရီကျော်ကြာဖြစ်ပွားသည့် တို က် ပွဲအတွင်း ကရင်နီပြည်သူများကို ကာကွယ်ရင်း ဒုဗိုလ် ရှေးဖဲ ကျဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။…
ဒုဗိုလ် ရှေးဖဲသည် ဒီးမော့ဆိုအရှေ့ခြမ်းဇာတိဖြစ်ပြီး ကရင်နီတပ်မတော်သို့ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အခြေခံစစ်ပညာ၊ အရာရှိသင်တန်း၊ စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ကရင်နီတပ်မတော် အမှတ်(၂)တပ်ရင်း၊ တပ်ခွဲ(၂)တွင်…
တာဝန်ထမ်းနေသူဖြစ်ပြီး လတ်တလော ကရင်နီပြည် တို က် ပွဲ ပြ င်း ထ န်နေချိန် ပြည်သူများကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ကယ်ထုတ်ရေး တာဝန်ယူရသူဖြစ်သည်။ဒု- ဗိုလ်ရှေးဖဲမကျဆုံးမီအထိ ၎င်းအနေနှင့် တို က် ပွဲအတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် စစ်ဘေးရှောင်..
ကရင်နီပြည်သူ (၁၀၀) ကျော်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံရာ နေရာသို့ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ဒီးမော့ဆိုသို့တာဝန်ဖြင့် ပြန်ရောက်လာသည်မှာ ရက်ပိုင်းသာရှိပြီး ကျဆုံးချိန်တွင် အသက် (၃၀) နှစ်ရှိပြီး ဇနီးသည်နှင့် ရင်သွေးငယ် သားတစ်ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း ကရင်နီပြည် လူငယ်သမဂ္ဂက ဖော်ပြသည်။….
သူမကို ” Pray for Myanmar ” တဈခုနဲ့ လုပျစားနတေယျ ဆိုပွီးပွောဆိုဝဖေနျနတေဲ့သူတှကေို အပွောမဟုတျပဲလုပျရပျနဲ့သကျသပွေလိုကျတဲ့ သူဇာဝငျ့လှငျ